Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) - Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) -
MYANWEN က ဘာတွေဆောင်ရွက်မှာလဲ။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည့် ဦးဆောင်
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာ့ လူမှု့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူ ပြုရန်။
To connect local and foreign business opportunities for Myanmar women. Enhancing business management skills to establish and operate businesses that are in line with international standards; Business ideas; To support Myanmar’s economic growth by developing practices
Member Life Long Member
Member Annual Member
မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar Women...
Myanmar Women Entrepreneurs...
© 2022All Rights Reserved by Myanwen. Powered by Source Code Co., Ltd.